UToshiba usasaza ii-mosfets ezimbini ze-80V ze-N-channel - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaUToshiba usasaza ii-mosfets ezimbini ze-80V ze-N-channel
Ezi zixhobo kuthiwa zilungele ukusetyenziswa kombane apho kusebenza khona ilahleko ephantsi kubalulekile, kubandakanya ukuguqulwa kwe-ac-dc kunye ne-DC-dc kumaziko edatha kunye nezikhululo zonxibelelwano kunye nezixhobo zokuqhuba iimoto.
Zombini i-TPH2R408QM kunye ne-TPN19008QM zibonisa ukunciphisa malunga ne-40% kwi-drain-source on-resistance (RDS (ON)) ngokuthelekisa iimveliso ezihambelana ne-80V kwiinkqubo zangaphambili ezinje nge-U-MOSVIII-H, amabango kaToshiba.
I-TPN19008QM inexabiso le-RDS (ON) ye-19mΩ (max.) Ngelixa ixabiso le-TPH2R408QM ngu-2.43mΩ.
Inkampani ithi inyusele ubume besixhobo, iphucula urhwebo phakathi kweRSS (ON) kunye neempawu zentlawulo yesango ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-15 kunye nentengiselwano phakathi kweRDS (ON) kunye nexabiso lokukhutshwa nge-31%.
Iifostile zibekwe kwiphakeji yomphezulu womhlaba kwaye zirhunyelwe kumthamo wombhobho womthombo we-80V.
Zisebenza kwiqondo lobushushu lomjelo ukuya kuthi ga kwi-175ºC.
I-TPN19008QM ilinganiselwe umjelo wangoku we-34A kwaye igcinwe kwiphakheji ye-3.3 × 3.3mm TSON ngelixa i-TPH2R408QM ilinganiswe ne-120A kwaye ifakwe kwiphakheji ye-5x6mm SOP.